I-Molino del Feo ukuya kwi-10. Ubume obunyulu kunye nentuthuzelo
I-El Molino del Feo yifama ekhethekileyo ye-30,000m2 ejikelezwe nguMlambo waseSan Juan, nje iyure enye ukusuka eMadrid. Yindawo yokuzola kunye nobuhle obungqongwe yindalo, phakathi kweholm oak kunye namahlathi om-oki.
Inezindlu ezi-2 ezizimeleyo ezinomtsalane omkhulu: Eyona iphambili yindawo yokusila yamanzi yenkulungwane ye-19 kwimigangatho emibini. Enye indlu yeyokwakhiwa kamva, isicwangciso esilula nesivulekileyo. Ungarenta ezi zindlu zimbini kunye okanye indlu enkulu (jonga amaxabiso ale meko).